ỤLỌ NCHE JENỤWARỊ 2013
Otu ọkachamara aha ya bụ Richard Kyle dere n’akwụkwọ ya na “otú ihe si na-agbanwe na mberede nakwa ọgba aghara ndị a na-enwe n’ụwa na-eme ka ndị mmadụ na-ekwukarị mgbe ha chere ụwa ga-agwụ,” nke ka nke, ma ọ bụrụ na o yie ka ò siiri ndị mmadụ ike ịkọwa ihe kpatara mgbanwe na ọgba aghara ndị ahụ. Ma, ihe mere ndị amụma a kọrọ akụkọ ha na Baịbụl ji buo amụma banyere ọgwụgwụ ụwa abụghị ka ha kọwaara ndị mmadụ ihe ndị na-eme n’oge ha, bụ́ ndị na-agbagwoju ndị mmadụ anya. Kama, ọ bụ ike mmụọ nsọ Chineke mere ka ha nwee ike ịkọwa ihe anyị ga-eji amata na ọgwụgwụ ụwa dị nso. Lebagodị anya n’amụma ụfọdụ ha buru ma jiri aka gị kpebie ma hà na-emezu n’oge anyị a ma ọ bụ na ha anaghị emezu.
mailto:?body=Ì Kwesịrị Ịtụ Ọgwụgwụ Ụwa Egwu?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2013003%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ì Kwesịrị Ịtụ Ọgwụgwụ Ụwa Egwu?
JENỤWARỊ 2013 Ì Kwesịrị Ịtụ Ọgwụgwụ Ụwa Egwu?
mailto:?body=JENỤWARỊ 2013 Ì Kwesịrị Ịtụ Ọgwụgwụ Ụwa Egwu?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fpub%3Dw13%26issue%3D20130101%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=JENỤWARỊ 2013 Ì Kwesịrị Ịtụ Ọgwụgwụ Ụwa Egwu?